Apple manangona vola 10.000 miliara dolara amin'ny R&D amin'ny 2016 | Avy amin'ny mac aho
Inona no lanin'i Apple amin'ny fampiasam-bola 10 tapitrisa $ amin'ny R&D?
Laura varo | | maro
Raha dinihina ny lisitr'ireo tsaho miely be ao amin'ny tambajotra, Apple dia ao anatin'ny fotoana voafaritra mety hidika hoe a teboka inflection amin'ny fitantanana orinasa. Fantatsika izany Mihena ny varotra iPhone ary mangataka fanavaozana ireo tandavan-vokatra isan-karazany ny mpampiasa, raha mbola manohy manatsara hatrany kosa ireo ao Cupertino izay tsy vita akory ny fanomezana azy ireo.
Ny teti-bola natokan'i Apple ho an'ny R&D dia nitombo isan-taona taorian'ny lalana mety fitomboan'ny orinasa mihitsy. Na izany aza, hatramin'ny nametrahan'izy ireo vola 2014 lavitrisa dolara tamin'ny 6.000, dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny paikady. Tamin'ny taona 2016 dia natokana i Apple mihoatra ny 10.000 miliara dolara ho an'ny R&D ary tombanana fa amin'ny 2017 dia hihoatra ny 12 tapitrisa izy ireo. Manokana inona ity fampiasam-bola lehibe amin'ny R&D ity?
Ny vaovao voaraintsika isan'andro momba azy akaiky ny ho avy ny vokatra Apple Nasongadin'izy ireo ny fanavaozana ny Macbook sy Macbook Pro. Ny fiaraha-miasa amin'ny ARM sy ny AMD hampiharana teknolojia mahomby kokoa amin'ny solosain'izy ireo sy ny fiaraha-miasa amin'ireo lehibe amin'ny tontolon'ny asa toy ny SAP sy IBM, toa tsy manamarina io fampiasam-bola be io amin'ny tetik'asa fampandrosoana.
1 Manana teboka malefaka ve i Apple amin'izao fotoana izao?
2 Tetikasa fikarohana fotsiny ve ny Apple Car?
Manana teboka malefaka ve i Apple amin'izao fotoana izao?
Amin'ny famakafakana tsotsotra ny fifaninanana dia hitantsika fa natokan'ny Apple ny fiezahany rehetra amin'ny fivoaran'ny Tsipika vokatra 5 ny fironana teknolojia mitovy amin'izany, raha ny marika hafa kosa mandrakotra karazana lehibe kokoa, izay midika hoe fatiantoka sasany mijery ny ho avy, na eo aza ny fahaiza-manaon'ny fanavaozana izay asehony tsy tapaka. Inona avy ireo dingana raisin'i Apple amin'io lafiny io?
Ny fiakarana lehibe amin'ny teti-bola natokana ho an'ny R&D amin'ny 2015 dia nifanojo tamin'ny tsaho voalohany momba ny fampandrosoana ny Tetikasa Titan, izay hitondra antsika ny Apple Car, fiara voalohany an'ny orinasa. Fantatray fa namorona ekipa olona mihoatra ny 1000 tarihinay ianao Steve Zadesky, fantatsika ny fifandraisana misy eo amin'ireo mpitantana Apple Tesla sy Magna Steyr -mpanamboatra fiara avo lenta- ary na dia mbola tsy voamarina aza dia mety ho fiara elektrika izany. Ny zava-drehetra dia mitarika antsika hieritreritra an'izany Apple manitatra sisintany hiatrehana ny fivoaran'ny tsena.
Tetikasa fikarohana fotsiny ve ny Apple Car?
Ny fampandrosoana ny Apple Car dia tetik'asa fatra-paniry laza ho an'ny orinasa. Nianarantsika vao tsy ela izay Nahazo trano sy tany, toy ny orinasa fanaovana tavoahangy tavoahangy Pepsi teo aloha, hita tany Sunnyvale, 1km miala ny trano misy trano 7 izay efa anisany fanitarana mangingina.
Fitaovana azo tao Sunnyvale ho an'ny fampandrosoana ny Apple Car.
Ny angona rehetra mifandraika amin'izany fampiasam-bola lehibe Nasongadin'izy ireo fa ny tetik'asa Titan dia tsy hijanona amin'ny fampisehoana maodely fiara tokana, fa Apple dia mety ho miloka matotra amin'ny fanitarana manomboka amin'ny orinasao ka hatramin'ny fanavaozana ny fiara.
Loharano - Ambony Avalon
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Inona no lanin'i Apple amin'ny fampiasam-bola 10 tapitrisa $ amin'ny R&D?
'Batman: Arkham Asylum' dia nihena 70% Mac App Store